कानुन दिवसको महत्व कति ?
संविधान दिवस, गणतन्त्र दिवसको महत्व जसरी घट्दै गएको छ, कानुन दिवसको महत्व पनि घट्न थालेको छ । कुनै पनि हालतमा कानुन दिवसको गरिमा र महिमा बढ्नुपर्छ । तवमात्र कानुनी राज छ भनेर मान्न सकिन्छ । यसपटकको कानुन दिवसमा जे नजारा देखियो, यसबाट कानुन बलियो छ भन्न सकिने अवस्था रहेन । कानुनविदहरुले समेत अपमानवोध गर्न बाध्य हुनुप¥यो ।
वैशाख २६ गते । कानुन दिवस । प्रधानन्यायाधीशले चियापानको कार्यक्रम राखे तर स्वागत मन्तव्यको कुनै कार्यक्रम राखेनन् । खबर फैलिएको थियो– न्याय क्षेत्रका बारेमा कुरा उठ्छ, बिबाद बढ्छ र सरकारप्रति दबाब सिर्जना हुन्छ भनेर चलाखी गरेको रे । कानुनविदहरु यसरी राजनीतिसँग डराउन थाले भने कानुन कसरी मजबुत हुन्छ, न्यायालय कसरी मजबुत र पवित्र हुन्छ ?
देशको लागि आज केही चाहिएको छ भने न्यायक्षेत्रको मजबुती हो । न्यायक्षेत्र मजबुत हुन न्यायकर्मीहरु स्वच्छ र स्वतन्त्र तथा संविधानप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । न्यायाधीशले गरेका फैसलाहरुमाथि प्रश्न उठ्नुहुन्न, सर्वमान्य सिद्धान्तमा आधारित र कानुनको सीमाभित्रबाट फैसला आउनुपर्छ ।
न्यायाधीशहरु जो नियुक्त भए ती बिबादित बने । बिबादितमात्र होइन, न्यायाधीश अयोग्य छन् भनेर मुद्दा परेको अवस्थासमेत देखियो । न्याय परिषदका प्रमुख हुन् प्रधानन्यायाधीश । संसदीय सुनवाईका क्रममा न्यायक्षेत्रमा रहेका कुडाकरकड हटाउँछु, न्यायक्षेत्र सुधार गर्छु भनेर बचन दिएर नियुक्त भएका प्रधानन्यायाधीश नै बिबादित निर्णय गर्न थाले, राजनीतिकरणबाट हच्किन थाले भने फैसला कसरी स्वच्छ र न्याययुक्त हुनसक्छ ? सर्वसाधारणको माँग छ न्यायालय बलियो हुनुपर्छ, प्रधानन्यायाधीश जनइच्छाबिपरित भड्किएको किन देखिदैछ ? न्यायक्षेत्रका अगुवामा आत्मबल भएन भने बाँकी न्यायाधीशरुको आत्मबल कसरी बलियो हुन्छ ?
कानुन दिवस भनेको व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिका लगायतका संवैधानिक निकायहरुको जमघट र भोजभत्तेरमात्र हो भनेर अर्थ लाग्नु हुन्न । कानुन दिवसले विधिको शासन छ भनेर सन्देश दिनुपर्छ र आमनागरिकलाई कानुन छ है भनेर भरोसा पनि जगाउन सक्नुपर्छ । कानुन दिवस लोकतन्त्रमा ठूलो महत्वको दिन हुनसक्नुपर्छ । तर यस वर्ष कानुन दिवस यस अर्थमा फितलो र फिक्का अनुभव गरियो । कानुन बलियो होस्, बिधिको शासन देखियोस आगामी दिनमा ।